China Precision ကြိတ်ခွဲစက် အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | Lingjun
ကြိတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် ကြိတ်ခွဲသည့်စက်ဖြင့် စက်ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်သည့် စက်ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြိတ်ဖြတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် လည်ပတ်နေပြီး၊ အလုပ်ခွင်နှင့် ကြိတ်ဖြတ်စက်၏ ရွေ့လျားမှုသည် အစာထဲတွင် ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် လေယာဉ်၊ groove၊ ကွေးကောက်သောမျက်နှာပြင်၊ ဂီယာစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကြိတ်စက်သည် ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ခွဲသည့် စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကြိတ်ခွဲသည့်လေယာဉ်၊ groove၊ ဂီယာသွားများ၊ thread နှင့် spline shaft အပြင်၊ ကြိတ်စက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ရေးဌာနတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသော planer ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော မျက်နှာပြင်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကြိတ်စက်သည် လေယာဉ် (အလျားလိုက်လေယာဉ်၊ ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်), groove (keyway, T-shaped groove, dovetail groove, etc.), ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများ (ဂီယာ၊ spline shaft, sprocket) ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ခရုပတ်မျက်နှာပြင် (ချည်မျှင်၊ ခရုပတ် groove) နှင့် အမျိုးမျိုးသော ကွေးညွတ်သောမျက်နှာပြင်များ။ ထို့အပြင်၊ လှည့်ပတ်နေသောကိုယ်ထည်၏ မျက်နှာပြင်နှင့် အတွင်းပိုင်းအပေါက်ကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြိတ်စက်အလုပ်လုပ်နေချိန်၊ အလုပ်စားပွဲ သို့မဟုတ် အညွှန်းခေါင်းနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ကြိတ်ဖြတ်စက်လည်ပတ်မှုသည် ပင်မလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး၊ စားပွဲတင် သို့မဟုတ် ကြိတ်ခေါင်း၏ feed လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဖြည့်စွက်ကာ၊ workpiece သည် လိုအပ်သော processing မျက်နှာပြင်ကို ရရှိနိုင်သည်။ . multi edge intermittent cutting ကြောင့် ကြိတ်စက်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ကြိတ်ခွဲစက်ကို ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
CNC နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းကို စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကနည်းပညာမှာ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာဖြစ်သည်။ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာသည် စက်မှုကုန်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အီလက်ထရွန်းနစ်သတင်းအချက်အလက်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အခြေခံထားသည်။ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာတွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှု၊ တိကျတိကျမှုစသည်ဖြင့် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များစွာ ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်၊ စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံအား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏ ချောမွေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ရိုးရာစက်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျ လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကိန်းဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာသည် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။ ပထမအချက်၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဖြင့် ကြိုတင်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်းပရိုဂရမ်၏ထိန်းချုပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်နည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ တိကျမှုကို မြင့်မားစေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏ အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်မှုသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး လုပ်သားများ၏ ကာယကြံ့ခိုင်မှုကို လျော့နည်းစေသည့် မတူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ တတိယအချက်၊ virtual ထုတ်လုပ်မှုသည် ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏ ပိုမိုထင်ရှားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် သတင်းအချက်အလက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနှင့် အတုအယောင် ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက် ထုတ်ကုန်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်စေရန်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ထုတ်ကုန်များကို အတုပုံစံဖြင့် ပြသရန် သတင်းအချက်အလက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနှင့် သရုပ်ဖော်မှု ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းများ၏ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပါ။
1. စက်ကိရိယာကိရိယာ ကိရိယာတွင် လျှောက်လွှာ
စက်ကိရိယာပစ္စည်းများသည် စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ လျှပ်စစ်အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတို့ကဲ့သို့သော ခေတ်မီနည်းပညာများ အပါအဝင် ဂဏန်းထိန်းချုပ်နည်းပညာကို စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး၏ mechatronics ကို နားလည်ရန် မတူညီသော စက်ကိရိယာကိရိယာများတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ . စက်ကိရိယာကိရိယာတွင် ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းသည် သမားရိုးကျစက်ကိရိယာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို အမွေဆက်ခံရုံသာမက စက်ကိရိယာကိရိယာ၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ၎င်း၏တိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အားကောင်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာသည် သမားရိုးကျ စက်ကိရိယာကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော ထုတ်ကုန်များ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်ကိရိယာများ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည် လက်ရှိကုန်ထုတ်နည်းပညာဖြင့် ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ အဆင့်ကို တိုက်ရိုက် ထင်ရှားစေသည်။ မိရိုးဖလာ စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်သည် ကြီးထွားလာနေသော အာကာသ လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အထူးသဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် အထူး ထင်ရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့် စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သာ အာကာသလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုကို အလွန်တိုးတက်စေပါသည်။ အနိမ့်ပိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် အပူဓာတ်နည်းခြင်း စသည့် အားသာချက်များသည် အစိတ်အပိုင်းများ တိကျမှု၏ အခြေခံဖြစ်သည်၊ နှင့် ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာထိန်းချုပ်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် ပုံပျက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်၊ တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်း၏ တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသည် ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် အစောဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားနည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ မော်တော်ကားလုပ်ငန်းသည် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များ တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီး မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးသည် ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏ တွန်းအားအောက်တွင် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုကို သဘောပေါက်သွားပါသည်။ ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းသည် ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ လုပ်သားအပေါ် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးတွင် သိသိသာသာ တိုးတက်မှုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
CNC စက်ယန္တရားနည်းပညာသည် စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပိုမိုအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာသည် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ ထိရောက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု၏ အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများစွာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော လိုအပ်ချက်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် CNC နည်းပညာသည် ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ သက်ရောက်မှုအောက်တွင် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသည် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးကြီးသော ကာလဖြစ်သည်။ CNC နည်းပညာအဆင့်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် CNC နည်းပညာ အသုံးချမှု၏ အချိန်မီခြင်းမှသာလျှင် ၎င်းသည် ကမ္ဘာနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၏ ရေရှည်တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ခုမှာ: အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ 24 နာရီထုတ်လုပ်မှု၊ 24 နာရီအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း။
နှစ်ခု: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စစ်ဆေးရေးပညာရှင်များ
၃။ ISO 9001 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစနစ် လက်မှတ်နှင့် ISO13485 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ် လက်မှတ်
လေးချက် : ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အား ပိုမိုစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါစေ။
ယခင်- တိကျသော CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ
နောက်တစ်ခု: တိကျသော အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
Cnc ကြိတ်စက် အစိတ်အပိုင်းများ ရောင်းချရေး
Cnc ကြိတ်စက် အစိတ်အပိုင်းများ